विमानभित्र सकेसम्म एक अर्कासँग नबोलौं !
October 23rd, 2020 -4min read
चाड पर्वको समयलाइ लक्षित गरी हामीले येस कोरोन महामारीबाट बच्न र दसैँको मौकामा यात्रा गर्नु हुने महानुभावहरुको सुरक्ष्याको निम्ती शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल सम्बद्ध डा। शेरबहादुर पुन संग एक छोटो अन्तर बार्ता गरेका छौ।
चाडबाडको मौसम छ, यात्रा गर्दा के के कुरामा ध्यान पु¥याउनु पर्छ, तपाईंका सुझाबहरू ?
यात्रा गर्दा बिशेषत समूह हुने भएकाले संक्रमण एक अर्कामा नसरोस् भन्नेमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मास्क सहि तरिकाले लगाउने, नयाँ मान्छेसँग कुराकानी नगर्ने र यात्रा अवधिभर हातलाई अनुहारमा (नाक, मुख र आँखामा) घरिघरि नलैजाने। गन्तव्यमा पुगेपछि साबुनपानीले राम्ररी हात धुनु पर्दछ ।
हवाई यात्रा र सडक यात्रामा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ ?
हवाई यात्राभर विमानका कर्मचारीले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्नु पर्दछ भने सकेसम्म एक अर्कासँग नबोल्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ । सडक यात्रामा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सहि तरिकाले अनिवार्य अपनाउनु पर्दछ। भाइरसको संक्रमण मानिसले नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने हो । तसर्थ यात्रा गर्दा सतर्कताका साथ जनस्वास्थका मापदण्ड अपनाऔ । सानो हेलचेक्राइँले मात्र पनि संक्रमित हुने र त्यो तपाईं, हामी परिवारका ज्येष्ठ वा दीर्घ रोग भएका सदस्य सम्म पु¥याउने माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले खोप उपलब्ध नभएसम्म वा महामारी मुक्त नभएसम्म सतर्कता अपनाई संक्रमण थप फैलनबाट रोक्न मदत गरौं ।
भाइरसविरुद्धको खोप नआएसम्म हामीले सर्तक भएर कोरोना भाइरससँगै बाँच्न अभ्यस्त बन्नु पर्ने हो ?
कोरोना भाइरस तपाई हामी संगै रहेकाले खोप विकास नभएसम्म सजक र सतर्क रहनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू निरन्तर अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
कोरोना भाइरस लागि सकेको मान्छेमा के कस्तो दीर्घकालीन असर देखिन्छ ? निको भइसकेका बिरामीले खानपान र जीवनशैलीमा के के सुधार गर्नुपर्छ ?
कोरोना भाइरसबाट मुक्त भैसकेपछि केहि व्यक्तिमा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ । यसबारे हालसम्म सिमित जानकारी मात्र भए पनि यसको असर बिभिन्न अंगहरूमा हुने देखाएको छ । हल्का ज्वरो वा शरीर तात्तेको महशुस गर्नु, खोकी लाग्नु र अत्यधिक थकान महसुस हुनु कोरोना संक्रमण पछि देखिने प्रमुख समस्या हुन् ।
त्यस्तै छाती भारी हुनु र श्वासप्रश्वासमा अबरोध हुनु, टाउको भारी हुनु, मुटुको चाल अनियमित हुनु, निद्रा नलाग्नु, पेट दुख्नु, डिप्रेसन हुनु आदि स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन् । खानामा फलफूल, सागपात र दूधमा जोड दिन सकिन्छ । भिटामिन डिकोे स्रोत सूर्यको किरण भएकाले घाम ताप्नु राम्रो हुन्छ ।
त्यस्तै प्रशस्त झोलिलो सुप खानु पर्दछ । संक्रमण भैसकेपछि वा उपचार गरिसके पछि शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कति समयसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएको र कोरोना महामारी समाप्त नभएसम्म भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क सहि तरिकाले लगाउने र साबुनपानीले हात धुने बानीलाई निरन्तरता दिई राख्नु पर्दछ ।
विश्वमा खोप बनेको कति समय पछि कसरी त्यो नेपालमा कसरी भित्रिनेछ ? खोप ल्याएको कति समयमा नेपालभर खोप लगाउन सकिएला ?
कोरोना विरुद्धका कतिपय खोपहरू क्लिनिकल ट्रायलको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् तर यसले सर्बसाधारणमा प्रयोग गर्ने मान्यता कहिले पाउँछ भन्ने यकिन भएको छैन । नेपालमा पनि कहिले कसरी आइपुग्छ भनेर हालसम्म स्पष्ट भैसकेको छैन ।